UChansa ugcine eyishiyile iPirates | Isolezwe
UChansa ugcine eyishiyile iPirates
Isolezwe / 21 June 2012, 07:01am /
DURBAN, SOUTH AFRICA - DECEMBER 10, during the Telkom Knockout Final match between Orlando Pirates and Bidvest Wits from Moses Mabhida Stadium on December 10, 2011 in Durban, South Africa Photo by Anesh Debiky / Gallo Images
KUBONAKALA ebheke eChloorkop amabombo kumgadli weFree State Stars, u-Edward Manqele, obegaqelwe yiKaizer Chiefs esihoxile ezingxoxweni.
Imenenja yeStars, uRantsie Mokoena, uthe yize umdlali eziqeqesha neqembu njengoba libuyile emaholidini kodwa ziyavuthwa izingxoxo phakathi kwabo neMamelodi Sundowns.
Uthe iSundowns iyona ekhombise okukhulu ukuzimisela ngoManqele emaqenjini osekuvele ukuthi ayamfuna.
“Siyakhuluma nabo futhi yibona abalokhu bebelesele ngokukhuluma nathi. Nokho okwamanje akukabi khona okuhlangene, sizomemezela uma sekukhona,” kusho uMokoena.
UManqele uzidonsele amehlo amaqembu athathwa njengezinkunzi kuleli okukhona kuwo ne-Orlando Pirates kulandela ukugila izimanga eshaya amagoli angu-11 ngesizini yakhe yokuqala kuPremiership ngaphansi kwesandla sikaSteve Komphela.
IStars kungenzeka ingagcini ngokulahlekelwa nguManqele kuphela njengoba noKomphela esembangweni wokuqeqesha iBafana Bafana.
UMokoena uthe akubathusi ukuthi bangalahlekelwa yilo mqeqeshi obabeke endaweni yesithupha ngesizini edlule.
“Sinazo izinhlelo zokubhekana nanoma yisiphi isimo. Ngabe siyaganga uma ngingathi asimbheki umqeqeshi kodwa ngeke sisho lutho ngaphambi kokuthi iSafa imemezele ukuthi ubani umqeqeshi weBafana.”
Ngakolunye uhlangothi iPirates imemezele ukuthi seyihlukene nomdlali wasesiswini, u-Isaac Chansa, osejoyine iqembu laseChina, iHenan Jianye FC.
Esitatimendeni esithunyelwe yiBucs ithe ibifisa ukumgcina lo mdlali owanqoba i-Africa Cup of Nations neqembu lesizwe laseZambia kodwa umdlali kade azicelela ukuhamba.
UChansa akazange akufihle ukuthi akeneme kweZimnyama njengoba beliyivela kancane ijezi ngesizini edlule.
zz Sekuqubuke indida ngoBongani Ndulula njengoba lo mdlali engabonwa kuLamontville Golden Arrows eqale ukuziqeqesha ngoLwesibili. Imenenja kaNdulula, uTim Sukazi, wadalula kwabezindaba ukuthi lo mdlali usayine ku-Arrows esuka kuPirates kodwa ezivele izolo zithi umdlali akayingeni eyokuya eThekwini. Ucingo lukaSukazi beluvaliwe izolo ngesikhathi ethintwa ukuze acacise ngokuqhubekayo.
zz ILeopards ihlola umdlali waseDR Congo uDjunga Munganga embone ngesikhathi bedlala neqembu lakhe i-St Eloi Lipopo kuCaf Confederations Cup.
Leli qembu lifuna nonozinti njengoba lifake ohlwini lwabachithwayo uPosnett Omony.